Ezona ndawo ziQhelekileyo zoKhetho kubathengi - [Iipesenti ezingama-86 zeWIN ngoJanuwari 2022] - Funda iiRhwebo ezi-2
Olona khetho lubalaseleyo kubathengi boBhengeza-uphononongo olupheleleyo lwango-2021!
Kwimeko efanayo kukhetho lwezorhwebo, ukhetho lwebhinari lukuvumela ukuba uqikelele kwiiasethi ezinje ngee-stock, ii-indices, igolide kunye neoyile ngaphandle kokuba ungumnini wesixhobo. Nangona kunjalo-ngokungafaniyo neenkontileka zemveli, ukhetho lwebhinari lubonelela ngeziphumo ezibini kuphela.
Ungaphela kwimali xa ukhetho olukhethiweyo luphela ngentlawulo echanekileyo, okanye uphulukana nesabelo sakho sonke. Ngale ngqiqo, iinketho zokubini zikufutshane nokungcakaza njengoko uza kufumana indawo yotyalo-mali kwi-Intanethi.
Ngale nto ithethwayo, kuninzi onokukufunda malunga nokukhethwa kokubini ngaphambi kokuba wahlukane nemali yakho, ke qiniseka ukuba ufunda isikhokelo esinzulu. Ngaphezulu kokucacisa ii-ins kunye nokuphuma kwendlela esisebenza ngayo esi sixhobo sezemali, sikwahlola ezona ndlela zibalaseleyo zokukhetha abathengi ngo-2021
Qaphela: Kuya kufuneka ubenolwazi oluqinisekileyo lomngcipheko osisiseko onxulunyaniswa nokuthengisa okukhethwa kukho kubini. Ngokwenyani, unokulungela ngakumbi ukhetho lwendabuko okanye usasaze ukubheja ukuba ufuna ukufikelela kwizixhobo zemali ezinobunkunkqele ngendlela enobungozi.
Zeziphi izinto onokukhetha kuzo ngokubini?
Kwimo yayo esisiseko, iinketho zokubini zibaluleke kakhulu kudidi lweeasethi ezikuvumela ukuba ubheje imali kwicala elizayo lezixhobo zemali. Njengoko igama lisitsho, iziphumo ezinokubakho zibambisene, kude kube ukuba uya kuphumelela isixa esimiselweyo senzuzo, okanye uphulukane nesabelo sakho sonke. Eyona njongo iphambili kukuvavanya ukuba ngaba ucinga ukuba i-asethi ekuthethwa ngayo iya kugqiba ngentla okanye ingaphantsi 'kwexabiso lesitrayikhi' elinikwa ngumthengisi ongakhetha kuye.
Umzekelo, masithi ukuba umthengisi wakho owukhethileyo unikezela ngexabiso lesitrayikhi leedola ezingama-200 kwii-Apple stocks, ngomhla wokuphela kwe-10 kusasa ngomso. Ukuba uziva unyamezele kwi-Apple, kuyakufuneka uhambe ixesha elide, okuthetha ukuba ucinga ukuba ngamaxabiso ezabelo aya kuba phezulu kune- $ 200 xa iphelelwa ngomso. Ukuba kuyenzeka, uyakuphumelela isixa esimiselweyo senzuzo- yithi iipesenti ezingama-80 zesibonda sakho. Ukuba isitokhwe seApple sinamaxabiso aphantsi kune- $ 200 ngo-10 kusasa ngomso, ungaphulukana nesibonda sakho.
Zombini izibonda kunye nenzuzo yakho eya kwahluka iya kuxhomekeka kwinani lezinto eziguqukayo. Eyona nto iphambili koku lixabiso lesitrayikhi ngokunxulumene nexabiso langoku lentengiso leasethi. Umzekelo, ukuba ii-Apple stocks zinexabiso kwi-199 yeedola namhlanje, kukho ithuba elihle kakhulu lokuba iya kudlula i-200 yeedola ngomso. Nangona kunjalo, ukuba ixabiso lesitrayikhi lonyuswe laya kwi-210 yeedola, amathuba oku kwenzeka aphantsi kwaye ke-kuya kufuneka ulindele inqanaba eliphezulu lokubuya.
Umyinge we-vs vs ireyithi yenzuzo nayo iya kumiselwa bubude bekhontrakthi yokhetho olukhethiweyo. Oku kunokuba mfutshane njengemizuzwana engama-60, ukuya kuthi ga kwiintsuku ezingama-365. Ngokwendalo, okukhona ixesha elide liyikhontrakthi, kokukhona unethuba elininzi lokuphela kwemali. Kananjalo, oku kuya kuba nefuthe ngqo kwimbuyekezo yakho enokubakho.
Kwimeko apho uza kuthengisa khona iinketho zokubini, kukho iimfumba zabarhwebi abasebenza kwindawo ekwi-intanethi. Ngale nto ithethwayo, kuya kufuneka uqiniseke ukuba umrhwebi omkhethileyo ulawulwa. Ngokwenza njalo, imali yakho iya kuhlala ikhuselekile ngalo lonke ixesha.
Iinkonzo kunye neengozi zeBinary Options
Ilungele abo banomdla omkhulu kumngcipheko
Ukurhweba amawaka ezixhobo zemali ngaphandle kokuba ube uneasethi
Khetha ukuba ucinga ukuba i-asethi iza kunyuka okanye yehle amaxabiso
Ongakhetha kubathengi kubarhwebi banikezela ngeendlela ezahlukeneyo zomngcipheko onokukhetha kuzo
Amaqonga ambalwa akuvumela ukuba uphume kwintengiso yakho yokubini ngaphambi kokuphelelwa
Idiphozithi kwaye urhoxise imali ngeendlela zokuhlawula zemihla ngemihla
Uninzi lweshishini lilawulwa
Inzuzo ayihlawuliswa rhafu e-UK
Udidi lweeasethi eziqikelelwa kakhulu
Urhwebo olungaphumeleli luya kubangela ukuba ulahlekelwe sisibonda sakho sonke
Ukuqonda uKhetho lweBhinary-Amagama aphambili
Izinketho zebhanari zixhobo eziyinkimbinkimbi zemali ezinokubonakala zidideka kubathengisi be-newbie. Ngokusesikweni, kukho inani lamagama aphambili ekufuneka wenziwe ngaphambi kokuba siveze imizekelo yokhetho lwebhinari yokwenyani.
Kananjalo, qiniseka ukuba ufunda oku kulandelayo:
Ixesha elide vs elifutshane
yokubini ukhetho lwabarhwebi izakuhlala ikunika ithuba lokuhamba ixesha elide okanye elifutshane. Ngokwemigaqo kaLayman, oku kubhekisa kwicala ocinga ukuba i-asethi iya kuhamba kulo. Umzekelo, masithi ujonge ukurhweba ngeendlela zokubini kwi-FTSE 100.
Ukuba uziva uzithembile kwisalathiso, ungahamba ixesha elide. Oku kwahlukile ekubekeni ukhetho lokufowuna kwisithuba sendabuko, okanye i-odolo yokuthenga kwilizwe le-CFD kunye norhwebo lwe-forex
Kwelinye icala lesiphelo, uya kucelwa ukuba uhambe ngokufutshane ukuba ubungumbano kwi-FTSE 100. Ngamanye amagama, ubuya kuba ucinga ukuba ixabiso liya kuphela xa ikhontrakthi yokhetho yokubini iphela. Oku kwahlukile ekubekeni ukhetho lokubeka okanye ukuthengisa iodolo kwindawo yemveli yotyalo-mali.
Ixabiso lesitrayikhi kukhetho lwebhanari ligama elibalulekileyo ekufuneka uluqonde ngokuqinileyo. Ukuba ubukhe wathengisa ngaphambili ngezivumelwano zokhetho zemveli, ke uyakonwabela ukwazi ukuba ixabiso lesitrayikhi lisebenza ngendlela efanayo xa uthelekisa kukhetho olukhethiweyo. Kulabo abangaziyo, ixabiso lesitrayikhi libhekisa 'kwindawo esembindini' yorhwebo lokukhetha okukhethwa kukho. Kuya kufuneka uthathe isigqibo sokuba uyafuna ukuhamba ixesha elide okanye elifutshane kwimpahla, ngokunxulumene nexabiso lesitrayikhi.
Umzekelo, masithi izitokhwe ze-Nike okwangoku zixabiso leedola ezingama-75, kwaye umrhwebi ubonelela ngexabiso lesitrayikhi se- $ 80. Ukuba uziva ukuba ixabiso lesitokhwe sakwaNike liya kubizwa ngaphezulu kweedola ezingama-80 xa ikhontrakthi yokhetho lwesivumelwano iphela, kuya kufuneka uhambe ixesha elide. Ukuba ucinga okwahlukileyo, kuya kufuneka uhambe mfutshane.
Kwiimeko ezininzi, i-binary options brokers ziya kubonelela ngamaxabiso oqhankqalazo kwi-asethi enye. Oku kukuvumela ukuba ukhethe inqanaba lomngcipheko olithandayo. Umzekelo, amanye amaxabiso esitrayikhi kwisitokhwe seNike anokuma kuma- $ 85 kunye ne- $ 90. Ixabiso eliphezulu lesitrayikhi, kokukhona uya kufumana ngempumelelo kwi-odolo ende (kunye ne-visa-versa xa ufutshane). Kungenxa yokuba kuya kufuneka ulindele umvuzo ophakamileyo njengoko amathuba orhwebo esiba mancinci.
Ukuphelelwa komhla kunye nexesha
Kwimeko efanayo kwiikontrakthi zemveli zokhetho, iinketho zokubini ziya kuhlala zinomhla wokuphelelwa kunye nexesha. Eli lixesha ngexesha apho ukhetho olukhethiweyo luhlala khona, kwaye ungaphumelela okanye uphulukane norhwebo lwakho. Njengoko besitshilo ngokufutshane ngaphambili, i-binary options brokers zihlala zibonelela ngemihla yokuphelelwa eyahlukeneyo ukukhetha kuyo. Oku kunokuba kufutshane njengemizuzwana engama-60, ukuya kuthi ga kunyaka opheleleyo.
Njengoko kulindelwe, ixesha elifutshane lifutshane, uphando kunye nohlalutyo olungena gingci luya kuba. Ngamanye amagama, akukho zikhombisi zobuchwephesha okanye iziganeko ezisisiseko seendaba emhlabeni ezinokusinceda siqikelele kwicala elizayo le-asethi umzuzu ngomzuzu. Ngapha koko, abatyali mali abanamava kunqabile ukuba bajonge naliphi na ixesha lobugcisa elingaphantsi kweeyure ezi-4.
Nangona kunjalo, umhla wokuphelelwa kukhetho lwakho olukhethiweyo unokuchaphazela ukubuyela kwakho kurhwebo. Umzekelo, ukuba uqikelela kwixabiso lekhontrakthi yokhetho olukhethiweyo oluphela rhoqo kwimizuzwana engama-60, uya kufumana imbuyekezo ephezulu kakhulu xa kuthelekiswa nokukhetha okuphela kwiinyanga ezintathu.
Xa kufikwa kwizibonda, isixa othathe isigqibo sokuqikelela asinanto yakwenza nexabiso leasethi. Ngokubalulekileyo, nokuba ixabiso le-asethi liyi- $ 20, $ 500, okanye i- $ 10,000 nge-barrel, i-ounce, okanye isitokhwe-unokuqikelela ubuninzi okanye kancinci njengoko uthanda-ngaphakathi kwemida ebekwe ngumthengisi ongakhetha kubini.
Umzekelo, masithi unqwenela ukuqikelela ngexabiso le-S & P 500 yokugqiba ngaphezulu kwexabiso lesitrayikhi lamanqaku angama-3,000 xa ukhetho lwebhanari luphela ngomso emva kwemini. Njengoko iinketho zokubini zibhatala ipesenti ebekiweyo, ungazibekela ngokwakho. Oku kuthetha ukuba i-binary options brokers zilungele zombini eziphantsi kwaye abathengisi bezibonda eziphezulu.
Ngokubhekisele ekusebenzeni inzuzo yakho enokubakho, iinketho zobambiswano kubathengi zichaza oku njengepesenti yokuphumelela. Ukuba urhwebo luphumelele, uyakufuna ukuphindaphinda izinga lokubuya ngokuchasene nesibonda sakho.
Umzekelo, masithi ukuba urhwebo lwakho olukhethiweyo lwebhanari uhlawula imbuyekezo eyi-90%, kwaye ubambe i-100 leedola. Ukuba uqikelela ngokuchanekileyo, uya kuphumelela i- $ 90 kwinzuzo ($ 100 yesiteki x 90%). Uya kuthi, ewe, ufumane isibonda sakho sokuqala se- $ 100 kwakhona, uthathe ukubuyela kwakho kwi $ 190.
Ubungakanani bepesenti yenzuzo ekugqibeleni buya kuxhomekeka kwiziphumo zeziphumo ezizayo. Umzekelo, masithi ujonge ukurhweba ngeendlela ezingafaniyo kwioyile ekrwada. Ngexesha lezorhwebo, ioyile ixabisa i $ 25 ngomgqomo. Umrhwebi ongakhetha kubhinari unikezela ngamaxabiso amane esitrayikhi iyonke - mabini kwabo banqwenela ukuya kufutshane, kunye nababini kwabo bahamba ixesha elide.
Ngokwendlela yokuhamba ixesha elide, ungakhetha kwixabiso lesitrayikhi le- $ 30 okanye i- $ 50. Kwimeko yexabiso lesitrayikhi leedola ezingama-30, unokufumana kuphela ukubuyiswa kwepesenti engama-60%. Njengoko ixabiso lesitrayikhi le- $ 50 lincinci kakhulu ukuba lingene, unokufumana imbuyekezo engama-95% ukuba uphumelele. Kwelinye icala lesiphelo, i-broker ekhethiweyo inokubonelela ngexabiso lesitrayikhi se- $ 20 kunye ne- $ 10 kwabo banqwenela ukufutshane. Ipesenti yokuphumelela iya kubonakala ngokufanelekileyo.
Umzekelo woRhwebo loKhetho lweBhinary
Ke ngoku ukuba uyawazi amagama aphambili ajikeleze ukhetho lwebhanari, ngoku sinokujonga umzekelo okwenyani wendlela urhwebo olunokusebenza ngayo. Masithi uthatha isigqibo sokurhweba ngeempahla ze-IBM.
Ukhetha i-IBM yesitokhwe sombini kunye nokuphela kweeyure ezingama-24
Ixabiso langoku le-stock ye-IBM yi- $ 120
Umrhwebi ongakhetha kuye ubeka ixabiso lesitrayikhi ixesha elide le- $ 124
Ipesenti yokuphumelela ngama-80%
Uziva unyuselwa kwi-IBM, ke uthatha isigqibo sokubeka iodolo ende kwisibonda se- $ 100
Ngexesha leeyure ezingama-24, ikhontrakthi yokhetho yokubini iphela ngexabiso le- $ 127
Njengoko uhambe ixesha elide, kwaye ukhetho lokubini lugqityiwe ngexabiso eliphezulu kunexabiso lesitrayikhi se- $ 124, uphumelele urhwebo lwakho
Imbuyiselo yakho iyonke iyi- $ 180. Oku kubandakanya i-80 yeedola kwinzuzo (i-100 yezigxina x 80%) kunye nesiteki sakho sokuqala se-100.
Ukujonga esinye isiphumo, masithi izitokhwe ze-IBM zithengisiwe ngexabiso leedola ezili-123 xa ukhetho lwebhanari luphelile. Inje le Ngaphantsi Ngaphandle kwexabiso lesitrayikhi le- $ 124 olithathileyo, ubuya kuphulukana norhwebo. Kananjalo, umrhwebi angagcina i-100 yeedola zakho.
Umzekelo woRhwebo oluKhetho oluBini olufutshane
Ukuqinisekisa ukuba uyayiqonda indlela esebenza ngayo urhwebo olukhethiweyo olunokubini, makhe sijonge umzekelo okhawulezayo. Siza kuthi uziva ubambekile kwixabiso leBitcoin, ke ukhetha ukuya kufutshane.
Ukhetha ukhetho lwe-Bitcoin yokubini kunye nokuphela kweveki e-1
Ixabiso langoku leBitcoin yi- $ 6,500
I-broker ongakhetha kuyo ibeka ixabiso elifutshane lesitrayikhi se-5,900, XNUMX
Ipesenti yokuphumelela ngama-95%
Uziva u-bearish kwi-Bitcoin, ke ugqiba kwelokuba ubeke i-odolo emfutshane kwi- $ 500
Ngexesha leeyure ezingama-48, ikhontrakthi yokhetho yokubini iphela ngexabiso le- $ 5,850
Njengoko uye wafutshane, kwaye ukhetho lokubini olugqityiweyo ngexabiso eliphantsi kunexabiso lesitrayikhi le- $ 5,900, uphumelele urhwebo lwakho
Imbuyiselo yakho iyonke iyi- $ 975. Oku kubandakanya i-475 yeedola kwinzuzo (i-500 yezigxina x 95%) kunye nesiteki sakho sokuqala se-500.
Ukujonga esinye isiphumo, masithi iBitcoin ibixabiso nge-5,901, 1 yeedola xa iphelelwe lixesha. Nangona usilele nge- $ 5,900 kuphela, ngekhe ulahle urhwebo lwakho. Kungenxa yokuba ixabiso leBitcoin laliphezulu kunexabiso lesitrayikhi le- $ 500 xa isivumelwano se-binary options siphelile. Kananjalo, ungaphulukana nesibonda sakho seedola ezingama-XNUMX.
Zeziphi iiasethi onokuthi urhwebe kuzo kwiiBhanari zoKhetho kubathengi?
Kwimeko efanayo kwiiplatifti zokhetho zemveli, i-binary options brokers zikunika ukufikelela kumakhulu, ukuba akunjalo mawaka yezixhobo zemali. Ukukunika umbono weeklasi ezininzi zeeasethi onokucinga ngazo xa urhweba ngeendlela zokubini, jonga uluhlu olungezantsi.
Izitokhwe kunye neZabelo
Izalathiso zeNtengiso yeStock
Iibhanki zemali zangaphambili
Ndingarhola ngaphandle kukhetho lweeBhanari kwangoko?
Esinye sezibonelelo eziphambili zotyalo-mali kwiikontraki zokhetho zemveli kukuba uya kuhlala unakho ukungenisa inzuzo yakho kwangethuba. Ngokubalulekileyo, ukuba uthengisa iinketho zaseMelika, ungaphuma kurhwebo lwakho nangaliphi na ixesha phakathi kwexesha ohlawula ngalo ipremiyamu, kunye nomhla ophela ngawo ukhetho.
Ngelishwa, uninzi lwabathengi abangakhetha kubaninizi abakuvumeli ukuba wenze oku, ke kuyakufuneka ulinde kude kuphele ikhontrakthi ngaphambi kokuba wazi isiphumo sokubheja kwakho.
Umzekelo, masithi uhambe ixesha elide kwikhontrakthi ye-Apple stock. Uthathe ixabiso lesitrayikhi le- $ 270 ngokuphela kweentsuku ezisi-7. Nangona isitokhwe seApple sisemalini ngomhla wesi-5, ngekhe uyiqonde inzuzo yakho. Ukuba ixabiso leApple livalwe ngaphantsi kweedola ezingama-270 ngosuku lwesi-7, ngewawuphulukene nokubheja kwakho. Olu luhlobo nje lwesithuba senketho yokubini.
Ngale nto ithethwayo, inani elincinci labathengi abangakhetha kubambiswano banikezela amandla okuphuma kurhwebo kwangoko. Ukuba benjenjalo, uyakunikwa ixabiso 'lemali ezinkozo', elingaphezulu okanye lingaphantsi kwesibambiso sakho sokuqala. Ekugqibeleni, ixabiso lakho lemali liya kusekelwa kumaxesha okwenene okhetho lokubheja okuphela kwemali.
Ukuhla kwezinto ezikhethiweyo
Nokuba intliziyo yakho iseti kurhwebo lwezinto onokukhetha kuzo, kufanelekile ukuba uqwalasele ezinye zezinto ezisezantsi.
Kananjalo, qiniseka ukuba wenze oku kulandelayo ngaphambi kokuqalisa ikhondo lomsebenzi onokukhetha kuwo:
Umda oPhezulu oPhezulu
Kwimeko yabathengi abangakhetha kubini, zimbini kuphela iziphumo ezinokubakho. Ungaphumelela ipesenti yakho yokuphumelela esisigxina, okanye ulahlekelwe sisibonda sakho. Umzekelo, ukuba ubambisa i-100 yeedola kwinqanaba lokuphumelela lama-80%, uya kuthi wenze i $ 80 yenzuzo okanye ulahlekelwe sisibonda sakho seedola ezili-100 Ngelixa oku kunokuba kwanele uninzi lwenu, kubalulekile ukuba ukhumbule ukuba unokuphoswa yimbuyekezo enkulu.
Umzekelo, masithi uqiniseke kakhulu ngexabiso le-GBP / USD ngokwanda kwezi ntsuku zisi-7 zilandelayo.
Ukugcina izinto zilula, masithi ixabiso lesitrayikhi li-1.35, ubambe i-300 yeedola, kwaye ipesenti yokuphumelela ngama-70%.
Ngexesha leentsuku ezisi-7, i-GBP / i-USD ngoku inexabiso nge-1.40. Oku kuthetha ukuba uphumelele ukubheja kwakho, ke wenze i-210 yeedola kwinzuzo ($ 300 x 70%).
Eyona nto intle ngolu hlobo, cinga ukuba ungakanani ongayenza ngokukhetha ukusasaza ukubheja? Umzekelo, ukuba ubeke i-1 ngedola nganye, kwaye umahluko phakathi kwexabiso lesitrayikhi le-1.35 kunye nexabiso lokuvala lama-1.40 ngamanqaku angama-500, ubuya kwenza i-500. Yandisa isibonda kwinqanaba ngalinye ukuya kwi- $ 2, kwaye ujonge kwi $ 1,000.
Ngamanye amagama, iinketho zokubini zikhawulela ukubuyela kwakho kwipesenti yokuphumelela emiselweyo, ngelixa ukuthanda ukubheja kwasasazeka, i-CFD, kunye nabathengi bakhetho bemveli banika ithuba lokwenza iingeniso ezingafakwanga.
Ukungakwazi ukuphuma kuRhwebo kwangethuba
Kwiimeko ezininzi, ukhetho lwebhanari lusebenza kakhulu njengeekhontrakthi zokhetho zaseYurophu. Ngokwemigaqo kaLayman, oku kuthetha ukuba awunakukwazi ukuphuma kurhwebo ngaphambi kwexesha kunye nomhla ophela ngalo ukhetho olukhethiweyo. Oku kunokuba yingxaki ngenxa yezizathu ezibini- zombini ezo ziko lolawulo lomngcipheko.
Okokuqala, awuyi kuba nakho ukukhupha iinketho zakho zokubini xa usemalini de ziphele iikhontrakthi. Umzekelo, masithi ufinyeza ixabiso lesitrayikhi leedola ezingama-200, kwaye i-asethi ngoku inexabiso le- $ 195. Ngeentsuku ezi-2 nje ukuya kuma de ziphele iikhontrakthi, unokulingwa ukuba utshixe kwiinzuzo zakho ngepesenti esezantsi yokuphumelela. Nangona kunjalo, i-binary options broker ivumela ukuba wenze oku.
Okwesibini-kwaye mhlawumbi okona kubaluleke kakhulu, i-binary options brokers ayinikezeli kakhulu ngohlobo lokunciphisa umngcipheko. Umzekelo, masithi uthatha isigqibo sokuhamba ixesha elide kwioyile kwi $ 29 ngomgqomo. Ukuze unciphise ilahleko yakho xa iimarike zichasene nawe, i-stop-loss order iya kukuvumela ukuba uphume kurhwebo lwakho ngokuzenzekelayo xa ixabiso elithile lishukunyiswa (yithi $ 27 ngomgqomo). Nangona kunjalo, ayisiyonto onokuthi uyenze xa uthengisa iinketho zokubini.
🥇 Amandla okuPhulukana neStake sonke
Kukwabalulekile ukukhumbula ukuba urhwebo olungaphumeleliyo kukhetho olunokubangela ukuba ulahlekelwe sisibonda sakho sonke. Umzekelo, ukuba uyahamba ngokufutshane kwioyile kwisibonda seedola ezingama-200, kwaye ungapheli kwimali, uya kuphulukana ne- $ 200 yakho iphela.
Ngelixa ikwayimeko enjalo xa kuthengiswa iinketho zesiko laseMelika- kude kube ngathi uya kuphulukana neprimiyamu yakho ukuba awophuli ixabiso lesitrayikhi, ubuncinci unalo ukhetho lokuhlawula urhwebo lwakho ngelahleko encinci- ngokuchasene ukulahlekelwa yiyo yonke into.
Ngale nto ithethwayo, ukukhetha iqonga le-CFD kubonelela nangokhuseleko olukhulu nangakumbi kubarhwebi abanokhetho, njengoko ekuphela kwendlela oza kuphulukana nayo kwisibonda sakho ukuba usebenzisa amandla - okanye iasethi iya kuziro. Umzekelo, ukuba uthenga isitokhwe se- IBM esixabisa i-1,000 10 ngee-CFD, kwaye ixabiso liwa nge-10%, uya kuphulukana ne-XNUMX% yesibonda sakho. Inokuba njalo xa kuthengiswa iinketho zokubini, njengoko kunjalo sisiphumo 'sayo yonke into okanye engekhoyo'.
Izinketho zeBhrokari kunye neRhafu
Kuxhomekeka kwindawo ohlala kuyo, unokufumana inzuzo kwinzuzo engenasimahla xa uthengisa iinketho zokubini. Umzekelo-kwaye kakhulu njengendawo esasazwayo yokubheja, abatyali mali e-UK baxolelwe kwirhafu yokukhetha iinketho zobuncinci, hayi ubuncinci kuba i-HMRC ijonga icandelo njengengcakazo.
Oku kukuvumela ukuba ugcine iipesenti ezili-100 zeenzuzo zakho, ezahluke mpela kwintengiso kwi-CFD okanye iqonga le-forex. Nangona kunjalo, ayizukuba njalo kuwo wonke amagunya, ke uyacetyiswa ukuba uthethe nomgcini zincwadi zerhafu ofanelekileyo kuqala.
Imirhumo kwii-Binary Options Brokers
Xa kuziwa kwimirhumo, uninzi lwabathengi abangakhetha kubaninzi bayakuvumela ukuba urhwebe ngaphandle kwekhomishini. Isizathu soku kukuba ubheja ngokufanelekileyo kunye nomthengisi ngokuthe ngqo, ngokuchaseneyo nokudibana nabanye abathengisi.
Kananjalo, ukuba ulahlekelwe yintengiso ebambekayo, umrhwebi uya kugcina isibonda osilahlileyo. Ngaphaya koko, awunayo iasethi esezantsi xa uthengisa iinketho zokubini, ke akukho mfuneko yokuba umthengisi athenge okanye athengise isixhobo semali egameni lakho.
Imirhumo ekuphela kwayo ekufuneka uyijongile xa ukhetha i-broker ongakhetha kuyo ngokubhekisele kwiidipozithi kunye notsalo. Ngelixa kuthenjwa ukuba iqonga likuvumela ukuba ubhatale iakhawunti yakho ngaphandle kokuhlawuliswa, akusoloko kunjalo. Kwangokunjalo, kuya kufuneka uphinde uvavanye ukuba yeyiphi eyona mali isezantsi yedipozithi kunye nokurhoxa okukhoyo.
Ungazifumana njani ezona ziBhenari zoKhetho eziBalaseleyo?
Ke ngoku ekubeni uyazi i-ins kunye nokuphuma kwendlela icandelo lokukhetha izinto ezisebenza ngayo, ngoku kufuneka uqale ngokucinga ukuba yeyiphi i-broker onqwenela ukuyisebenzisa. Kungenxa yokuba akukho-mabini kubini abarhweba ngokufanayo.
Umzekelo, ngelixa umrhwebi enokukunika ukufikelela kumawaka ezixhobo zemali, ayizukulunga ukuba ayiyixhasi indlela oyikhethileyo yokuhlawula.
Kananjalo, singacebisa ukwenza oku kulandelayo ngaphambi kokuvula iakhawunti ngeqonga elitsha.
Ummiselo kunye nelayisensi
Eyona nto ibalulekileyo ekufuneka uyivavanye kukuba umrhwebi ongakhetha kubhanana ulawulwa okanye hayi. Amacandelo athile esithuba afana nala aseNtshona West, ke kuya kufuneka ulumke ukuba leliphi iqonga ongena kulo.
Kungenxa yokuba kwezinye iimeko, ii-binary options brokers azilawulwa konke konke, ke oku kuya kusebenza njengeflegi ebomvu ebomvu. Nokuba umrhwebi ulawulwa, kufuneka ugwebe ukuthembeka komkhuphi welayisensi.
Umzekelo, umrhwebi okhetha ilayisensi kwiiMarshall Islands ngaphezulu kwe-UK ye-FCA okanye i-CySEC eCyprus kufuneka abethe intsimbi yealam. Ekugqibeleni, apho umrhwebi ongakhetha kubhanana alawulwa khona unokuba nelizwi elikhulu kukhuseleko lotyalo-mali lwakho.
Iindlela zokuhlawula ezixhaswayo
Kuya kufuneka uphonononge ukuba zeziphi iindlela zokuhlawula iqonga elixhasayo. Njengoko i-binary options broker ihlala ibonelela ngeenkonzo zayo kubathengisi abathengisayo, uya kuhlala ukhetha kuluhlu olubanzi lweendlela zokuhlawula zemihla ngemihla.
Oku kuya kubandakanya ukubhatalwa ngokwesiko okanye kwikhadi letyala, ukudluliselwa kwebhanki, okanye i-e-wallet njengePaypal, iSkrill, okanye iNeteller. Ungalibali ukujonga ukuba yeyiphi imirhumo esebenzayo kwindlela oyikhethileyo yokuhlawula- kunye nokuba yeyiphi i-akhawunti encinci ekufuneka uyihlangabeze.
✔️ iinketho zeBhanari zesiko
Yonke ilungile kwaye isebenzise kakuhle i-broker elawulwayo ekhethiweyo exhasa indlela oyikhethileyo yokuhlawula, kodwa uya kushiyeka uphoxekile ukuba iyasilela kwiimarike ezithengisekayo.
Iindaba ezimnandi zezokuba unokwazi ukujonga ukuba zeziphi iindlela zokubini ezinikezelwa ngumrhwebi ngaphambi kokuba ubhalise. Kungcono ukhethe amaqonga abonelela ngoluhlu olupheleleyo lweeklasi zeeasethi- kubandakanya kodwa kungaphelelanga kwisitokhwe, ii-indices, izinto zorhwebo kunye nee-cryptocurrensets.
✔️ Ubuncinci beZibonda
Njengoko sixoxile kwisikhokelo sethu sonke, ukhetho lwebhanari luluhlu lweeasethi ezinokuthelekiswa. Kananjalo, ukubheja kwakho okusemgangathweni kukuqala ngesibonda esisezantsi de ube uziva ukhululekile.
Uninzi lwabathengi bebhanari ezikhethiweyo zivumela ukuba ubambe nje i- $ 1 ngesivumelwano ngasinye, esilungileyo. Nangona kunjalo, sidibene namaqonga afaka ubuncinci bobungakanani bokurhweba be- $ 100. Ngelixa oku kunokuba nomtsalane kubaxhasi abaphezulu bendawo yokubini, ayizukubathengisela i-newbie.
Ukuphumelela amaxabiso epesenti
Kuya kufuneka ube nokuqonda okuqinisekileyo kokufumana iipesenti zokuphumelela. Umzekelo, umgangatho wemizi-mveliso kwisithuba sokukhetha ubunini kukuphumelela okungama-95%. Ke, ukubheja kwe- $ 1,000 kuya kuvelisa ukuhlawulwa okuphezulu kwe- $ 950. Nangona kunjalo, abanye abathengisi abangakhetha kubambisene baya kubonelela ngamaxabiso okuphumelela asezantsi- ekunokwenzeka ukuba kuluhlu lwe-70% -80%.
Kwelinye icala lesiphelo, siye safumana nabathengi abangabanikezeli abanikezela ngepesenti yokuphumelela edlula i-100%. Ungalibali, njengoko izinga lokuwina lipesenti linyuka, amathuba okubheja kwakho ukufika emalini ancipha.
Ukhuphiswano lwamaxabiso eStrike
Ukuqhubela phambili ukusuka kwicandelo elingentla, kuya kufuneka uphinde uvavanye ukhuphiswano lwamaxabiso esitrayikhi anikezelwa ngumrhwebi. Umzekelo, masithi uthengisa iinketho zobunambuzane kwisitokhwe sikaFacebook, esinexabiso ngoku $ 129.
Abarhwebi ababini babonelela ngepesenti yokuphumelela ye80%
Umrhwebi A unexabiso lesitrayikhi ixesha elide le- $ 134, kunye nexabiso elifutshane lesitrayikhi se- $ 124
Umrhwebi B unexabiso lentelekiso elide le- $ 138, kunye nexabiso elifutshane lesitrayikhi se- $ 120.
Kula mabini mabini kubini ocinga ukuba ungakhuphisana ngakumbi? Ewe, oku kuya kuba ngu-Broker A. Isizathu soku kukuba nangona ufumana ipesenti yokuphumelela ye-80% kuwo omabini amaqonga, i-Broker B ifuna ukuba isitokhwe se-Facebook sigqithe kwi-138 yeedola xa uhamba ixesha elide, kunye ne-120 yeedola xa usenza mfutshane. Nangona kunjalo, i-Broker A ifuna kuphela ixabiso lesitrayikhi le- $ 134 / $ 124 ukuze libe semalini, eya kuba lula kakhulu.
Izixhobo zemfundo nezophando
Nangona izixhobo zophando ziya kuba nokusetyenziselwa umda xa kuthengiswa iinketho zokubini kunye nemihla yokuphelelwa yisikhathi emfutshane kakhulu, zinokusebenza ngokurhweba ixesha elide. Umzekelo, ukuba uthengisa iinketho zokubini kunye nomhla wokuphela kweenyanga ezi-6, uya kufuna ukufikelela kuluhlu lwezalathi zobuchwephesha kunye nezixhobo zohlalutyo lwetshathi.
Kuya kuba luncedo ukuba umrhwebi ongakhetha kubhanari unikezela ngeendaba ezisisiseko ngexesha-lokwenyani, kunye nohlalutyo oluqhubekayo lweemarike. Ngokwemfundo, sikhetha i-binary options brokers ezilungiselela abathengisi be-newbie. Oku kufanele kubandakanya inani leevidiyo eziluncedo kunye neeblogi, izikhokelo zenyathelo ngamanyathelo, kunye nee-webinars eziqhelekileyo.
Kubalulekile ukuba ukhethe umrhwebi onikezela ngenkxaso kubathengi abakumgangatho ophezulu. Njengokukhetha okubini okuqhelekileyo kurhwebo ngesiseko se-24/7, uya kufuna ukusebenzisa i-broker exhaswa ngababoneleli ngeenxa zonke. Oku kufuneka kuza ngohlobo lwengxoxo ephilayo, i-imeyile, kunye nenkxaso yefowuni.
Ongakhetha kubathengi Abarhwebi: Ungaqala njani namhlanje
Ukuba unomnwe wakho ekutshayeni kwaye unqwenela ukuba uqalise ukurhweba ngeendlela zokubini okwangoku, apha ngezantsi sidwelise isikhokelo ngamanyathelo alula ukuba ulandele. Oku kubandakanya inkqubo yokuphela kokuphela kokuvula iakhawunti, ukufaka imali, kunye nokuseta urhwebo lwezinto onokukhetha kuzo.
Inyathelo 1: Fumana uMthengisi oBalaseleyo woKhetho lweeMfuno zakho
Izibuko lakho lokuqala lokutsalela umnxeba iya kuba kukufumana umthengisi wezinto onokukhetha kuzo ohlangabezana neemfuno zakho zorhwebo. Eyona ndlela yokwenza oku kukulandela iingcebiso esizichazile kwicandelo elingentla. Iindawo ekugxilwe kuzo eziphambili kufuneka zibe ngummiselo, iimarike ezithengiswayo, kunye neendlela zokuhlawula.
Ukuba awunalo ixesha lokufumana i-broker ongakhetha kuyo ngokwakho, skrolela ezantsi ezantsi kweli phepha ukuphonononga ezona zintathu ziphezulu ze-2021. Zonke iiarhente zethu zokukhetha ukubhengeza ezinconywayo ziza kuhlolwa kwangaphambili, ke qiniseka ukuba imali yakho sikhuselekile ngawo onke amaxesha.
Inyathelo 2: Vula iAkhawunti kwaye uqinisekise isazisi
Ukuba usebenzisa i-broker ekhethiweyo ye-broker (ekufuneka uyiyo), ngoku kuya kufuneka uvule iakhawunti. Oku kufuna ulwazi oluthile olusisiseko kwifom yakho, enjengeyakho:
Inombolo yeRhafu kaZwelonke
Ubume bokuhlala kwakhona
Ukuqinisekisa ukuba umrhwebi uyayithobela imigaqo yokuchasana nemali, iya kukucela ukuba uqinisekise isazisi sakho. Uninzi lwabathengi bebhanari bayakuvumela ukuba wenze oku ngokufaka ikopi yesazisi esikhutshwe ngurhulumente. Oku kunokuba yipasipoti okanye ilayisensi yokuqhuba.
Inyathelo 3: Iimali zeDeposithi
Nje ukuba ulayishe i-ID yakho, kuyakufuneka ufake imali. Izinketho kufuneka zibandakanye i-wallet / ikhadi lekhredithi e-wallet, okanye ugqithiselo lwebhanki. Qiniseka ukuba uyayifumana imali encinci yedipozithi yomthengisi.
Inyathelo 4: Khangela uKhetho lweeMakethe eziKhethiweyo
Ngoku kuya kufuneka ufumane indawo yokuthengisa onokukhetha ukuyithengisa. Ukuba usebenzisa i-broker ekwi-Intanethi egxile kuluhlu lweeklasi zeasethi, yiya ngaphezulu kwicandelo lokukhetha indawo yokubini.
Nje ukuba ulapho, khangela ukuba uninzi lweendlela zentengiso ezikhethiweyo ezixhaswa ngumrhwebi. Oku kuya kubandakanya ukuthandwa kwesitokhwe kunye nezabelo, ioyile kunye negesi, ii-indices, isinyithi esomeleleyo, kunye nee-cryptocurrensets.
Nje ukuba uyifumene iasethi onqwenela ukuyithengisa, yenza inkathalo eyongezelelweyo ukuvavanya ezi metric zilandelayo:
Umhla wokuphelelwa kunye nexesha
Inyathelo 5: Beka uKhetho lwakho lweBhinari
Ngoku kufuneka ubeke ukhetho lwakho lokubini. Sele uzivavanyile iziseko, kungoko kufuneka:
Ngena kwisibonda sakho. Ungalibali, ukuba uphulukana nokubheja, ulahlekelwa sisibonda sakho ngokupheleleyo
Thatha isigqibo sokuba uyafuna ukuhamba ixesha elide okanye elifutshane.
Nje ukuba iodolo yakho ibekwe, emva koko ukwinceba yeemarike zezemali. Kwiimeko ezininzi, kuyakufuneka ulinde iinketho zokubini ziphelelwe lixesha ukuvavanya ukuba ukubheja kwakho kuyimpumelelo okanye akunjalo.
Ezona ndlela zibalaseleyo zoKhetho lweBhinary ka-2021-Okhetho lwethu oluphezulu lwe-3
Ngaba ujonge ukuqala ukurhweba ngeendlela zokubini ngoku, kodwa awunalo ixesha lokuphanda ngomrhwebi ngokwakho? Apha ngezantsi uyakufumana abarhwebi bethu abathathu abaphambili be-3.
1.Urhwebo lweCrypto- Joyina nathi kwaye uqalise ukuba sisityebi ngeCrypto Trader!
Umhwebi we-Crypto liqela eligcinelwe kuphela abantu abatsiba kwimbuyekezo yempambano ethi i-Bitcoin ibonelele kwaye ngokuzolileyo baqokelele imali eninzi ngokwenza njalo. Amalungu ethu ayonwabela ukuphumla kwihlabathi liphela inyanga nenyanga ngelixa besenza imali kwiLaptop yabo ngemizuzu nje embalwa "yomsebenzi" yonke imihla.
Ubuncinci bedipozithi eyi- $ 250
Akukho ntlawulo yokurhweba ngaphandle kokusasazeka
Ubhaliso olukhawulezayo kunye nenkqubo ye-KYC
Akukho siqinisekiso sokuba uza kwenza imali
Ndwendwela uMthengisi weCrypto
Isishwankathelo, iinketho zokubini zivumela ukuba uqikelele kwii-asethi ngokucofa iqhosha. Kufuneka uthathe isigqibo sokuba ingaba i-asethi iya kuvalwa ngexabiso eliphezulu okanye eliphantsi kunexabiso lesitrayikhi elichaziweyo. Izivumelwano zinokuhlala imizuzwana engama-60, ukuya kuthi ga kwiintsuku ezingama-365.
Nangona kunjalo, ukhetho olukhethiweyo aluyi kuba lolwabantu bonke-ngakumbi ukuba uyiloluhlobo lomrhwebi othanda ukusebenzisa isicwangciso-buchule esihlasela umngcipheko. Nangona kunjalo, ukuba uyasithanda isandi sokurhweba ngeendlela zokubini, sichaze ii-ins kunye nokuphuma kwendlela esisebenza ngayo esi sithuba sotyalo-mali.
Ukukunceda ukhethe iqonga oza kurhweba nalo, sixoxe nangabarhwebi abathathu abaphambili bokhetho lwango-2021. Ekugqibeleni, qiniseka ukuba uyabazi ubungozi bokurhweba ngeendlela zobuninzi, njengoko uya kulahla isiteki sakho ukuba ukubheja akuphumelelanga.
Nguwuphi umahluko phakathi kokukhetha ngokwesiko kunye nokukhethwa kokubini?
Nangona iyafana ngokwendalo, iinketho zokubini azinakuvumela ukuba uphume kurhwebo ngaphambi kokuba ikhontrakthi iphele, ngelixa ukhetho lwesiqhelo lusenza. Ngaphaya koko, ukhetho olukhethiweyo luvumela kuphela ukuba ufumane isixa semali esiqingqiweyo, ngelixa ukhetho lwendabuko ngokungathandabuzekiyo lungabhalwanga.
Yeyiphi eyona dipozithi iphantsi kubarhwebi abanokukhetha kuzo?
Ongakhetha kubathengi kubathengi njengeBinary.com bayakuvumela ukuba ubeke i $ 5 nje. Abanye bafuna okungakumbi, ke qiniseka ukujonga oku ngaphambi kokuvula iakhawunti.
Lithini 'ixabiso lesitrayikhi' kurhwebo olunokukhethwa?
Ixabiso lesiteleka limisela inqanaba eliphakathi kurhwebo, kwaye igqibe kwelokuba leliphi ixabiso elifunekayo ukubetha ukuze uphumelele. Umzekelo, ukuba ixabiso lesitrayikhi li- $ 200 kwaye ufuna ukuhamba ixesha elide, uya kuphumelela ukubheja ukuba ikhontrakthi iyavalwa ngexabiso le- $ 200.01 okanye nangaphezulu.
Ngaba kubanjwe kubini kubathengi okulawulwayo?
Ewe nohayi. Uninzi lwabathengi bebhanari olulawulwayo luyalawulwa. Nangona kunjalo, amaqonga aliqela asebenza ngaphandle komthetho osemthethweni. Kananjalo, tyikitya kuphela kunye nomrhwebi olawulwayo.
Ngaba iinketho zokubini zenzuzo ngaphandle kweerhafu?
Oku kuxhomekeke kwilizwe ohlala kulo. E-UK, iinketho zokurhweba ngamabhanari zijongwa njengokungcakaza yi-HMRC, ngenxa yoko inzuzo ayihlawuliswa rhafu. Nangona kunjalo, oku akunakuba njalo kwenye indawo, ke qiniseka ukuba ufuna ingcebiso kubuchwephesha.
Zithatha ixesha elingakanani iikhontrakthi zokhetho lokubini?
Izinketho zebinary ziqala ngomhla wokuphelelwa yimizuzwana nje engama-60, ukuya kuthi ga kunyaka-1.
Yimalini onokuyenza xa uthengisa iinketho zokubini?
Umrhwebi ongakhetha kubhanana uya kuchaza 'ipesenti yokuphumelela' kwisivumelwano osikhethileyo. Ukuba urhwebo luphumelele, kuya kufuneka uphindaphinde inqanaba ngesibonda sakho. Umzekelo, ukuba ireyithi yokuphumelela ingama-80% kwaye ubiza i-10 yeedola, uza kwenza i- $ 8 kwinzuzo.